म्यासअप | Martech Zone
मंगलवार, फेब्रुअरी 21, 2006 बिहीबार, अक्टुबर 23, 2014 Douglas Karr
यस हप्ता म पहिलो वार्षिक मा उपस्थिति छु म्यासअप क्याम्प माउन्टेन भिउ, CA मा। अनुसार एक म्यासअप को परिभाषा विकिपीडिया एक वेबसाइट वा वेब अनुप्रयोग हो जुन एक भन्दा बढि स्रोतबाट सामग्री संयोजन गर्दछ। मेरो लागि, यसको सीधा अर्थ एक एकीकृत वेब अनुप्रयोग हो। गत बर्ष वा धेरैमा मैले धेरै 'म्यासअपहरू' निर्माण गरेको छु वा धेरै म्यासअपमा संलग्न भएको छु।
पहिलो शिविरमा आउन, यद्यपि, एक अविश्वसनीय अनुभव भएको छ। ठूला र सानाका साथसाथै टेक्नोलोजीमा ड्राइभ गर्ने कम्पनीहरूसँग भेट गर्नु राम्रो भयो। यद्यपि म सिलिकॉन उपत्यकाको छेउमा गाडिन्छु, म वास्तवमै बग लिन थाल्छु! वेब २.० आउँदैछ। तपाईं यसको बारे मा उत्साहित हुनुपर्छ किनभने यसको अर्थ छिटो विकास, बजारमा उत्पादनहरू ल्याउने थोरै समस्याहरू, र सजिलो एकीकरण।
केही राम्रो चीजहरू:
Eventful.com - यो एक अविश्वसनीय उपकरण ईडीएडबी (घटनाक्रम र स्थान डाटाबेस) एपीआई मा निर्मित छ। केहि प्रयोगहरू साँच्चिकै उल्लेखनीय छन् ... उदाहरणका लागि तपाईं आफ्नो आईट्यून्स प्ले सूची अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूसँग सम्बन्धित घटनाहरूको क्यालेन्डर फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ। वाह विकासकर्ताहरूले एक आईएम बोटको विकास पनि गरे जुन तपाईले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। (NYC आज रातीका घटनाहरू? र यो न्यूयोर्क शहरमा आजका सबै घटनाहरूसहित फिर्ता आउँदछ)।
याहू! र गुगलले विकासको खुला रिलिजका साथ जीआईएस विश्वलाई उल्टो बनाउँदैछ एपीआई ठेगाना सफा गर्ने, जियो कोडिंग, र म्यापि .को लागि उपकरणहरू। मैले years बर्ष पहिले विक्रेताको लागि काम गरें जुन सयौं हजारौं डलर खर्च गरिरहेको थियो यस्तै उपकरणहरूका लागि जुन अब नेटमा उपलब्ध छ सबैको लागि प्रयोग गर्नका लागि।
flyspy.com - यस कम्पनीले एक एप्लिकेसन बनाएको छ जुन मूलत: एयरलाइन उद्योगमा लुगा च्यात्ने गर्दछ र उनीहरूको क्रिप्पी मूल्य निर्धारण योजनाहरू संसारमा हेर्नका लागि बाहिर राख्छ! के तपाइँ उडान मूल्यमा जाँच्दै हुनुहुन्छ र किन यो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन? यो मान्छे उपकरण देखाउन सक्छ कि तपाईं आफ्नो समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ ... यो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन!
StrikeIron.com - अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेसको लागि वेबको विकि the मेशीन।
mFoundry.com - यी मानिसहरू मोबाइल एकीकरणको मास्टर हुन्। उनीहरूले एउटा प्रणाली प्रदर्शन गरे जहाँ म वास्तवमा हेर्न सक्दछु कि मेरो मोबाईल सक्षम अनुप्रयोग वेब इन्टरफेस मार्फत फोनमा कसरी चल्दछ!
Mozes.com - अर्को मोबाइल टेक म्यासअप, यी केहिसँग केही राम्रो चीजहरू छन्। अहिले नै उनीहरूसँग एउटा प्रणाली रिलीज गरिएको छ जहाँ तपाईं रेडियोमा बजिरहेको गीत पत्ता लगाउन रेडियो स्टेशनको कल चिठीहरू सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ।
Runningahead.com - गुगल नक्सा प्रयोग गरेर, यी मान्छेहरूले प्रशिक्षक, साइकल चालक, धावक, इत्यादिहरूको लागि उनीहरूको माईल लग गर्न ईन्टरफेस बनाए। माईलहरू मात्र म्यापिpping मात्र गर्दैन, तर बाटोमा भएका उचाइ परिवर्तनहरू पनि प्रदर्शन गर्दै !!!
नक्शा बिल्डर - यो मान्छे आफ्नो खाली समयमा आफ्नो ग्यारेजबाट बाहिर काम गर्दछ र गुगल वा याहूको प्रयोग गरेर तपाईंको आफ्नै नक्सा बनाउनको लागि GUI इन्टरफेस बनाएको छ! त्यो मात्र होईन, तर उसले आफ्नै विकास गरिरहेको छ एपीआई त्यो जेनेरिक छ र कुनै पनि अन्य GIS API का कुरा गर्दछ। Frickin शानदार !!!
माइक्रोसफ्ट, सेल्सफोर्स डॉट कॉम, एक्सेक्टरेट, जेन्ड, PHP, MySQL, Yahoo !, गुगल, eBay, Amazon ... सबै ठूला केटाहरू उपस्थित थिए। राम्रो कुरा, यद्यपि… के तिनीहरू मेशेरहरू लाई मद्दत गर्न र मार्गदर्शन गर्न आएका थिए, एक अर्कामा उनीहरूको टेक्नोलोजीहरू अगाडि नराख्न। मैले कुनै पनि प्रमुख बिक्री पुशहरू देखिन। सम्पूर्ण शिविर त्यहाँ साँच्चै थियो कम्पनीहरु र डेवलपर्सहरु लाई एकै साथ 'Mashup' आन्दोलन सुरु गर्न।
कस्तो हत्यारा हप्ता! मसँग मेरो कम्पनीमा फिर्ता ल्याउनको लागि यति धेरै चीज छ कि हामी आफ्नो एपीआई विस्तार गर्न जारी राख्छौं। साथै, यो धेरै अन्यसँग हाम्रो अनुप्रयोग 'म्यासअप' गर्न रमाईलो हुनेछ। अर्को महिना वा दुईमा म कति निद्रा लिने कुरामा निश्चित छैन!
थप जानकारीको लागि, जानुहोस् Mashupcamp.com। तपाईं अर्को सालको म्यासअपको लागि प्रारम्भिक पनि दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ! म तिमीलाई त्यहाँ देख्छु।
टैग: घटनाक्रमफ्लास्पाईGoogle +नक्शा निर्माणकर्ताम्यासअपम्यासअप क्याम्पmfoundryहिमाल दृश्यमोजेजचलिरहेकोस्ट्राइकिरनYahoo